နှင်းဆီတစ်ခင်း ပန်းတစ်ခြင်း: လက်ထပ်ခြင်း၏ နောက်ပိုင်း စာမျက်နှာများ
တကယ့်အဖြစ်အပျက် ဇာတ်လမ်းတွေကတော့ စိတ်ကူးယဉ် ဇာတ်လမ်းလို ဘယ်လှမလဲ မ ရယ် ဒါတွေက အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်နေတာတွေပဲ
ကောင်းပါတယ် အမ ဇာတ်လမ်းလေးက ယောက်ျား အားလုံးကိုမဆိုလိုပါဘူး ဒါပေမယ့် ၉၉ ရာခိုင်းနှုန်းကတော့ အဲလိုမျိုး (အဲလိုမျိုး ဆိုတာ အိမ်ထောင်ကျပြီး နောက်မီးလင်းတာကို ပြောတာပါ ကွဲတာလဲရှိသလို မကွဲတာလဲ ရှိမှာပေါ့ ) တွေချည်းပါပဲ
မ နော် တရားရပြီးတောထွက်မသွားနဲ့ဦးနော် သမီးတို့ စာမဖတ်ရဘဲ နေမယ် ဟဲဟဲ
ဘယ်သူတွေ အသစ်တင်လဲ ဆိုတာ ကြည့်ပြိး သူများတွေ အိမ် အရင်သွားတယ်လေ ပြီးတော့ မ ဆီကို လာခဲ့တာ နောက်ဆုံးပိတ် ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ စာ အေးဆေး ဖတ်ချင်လို့ ဟီးးးးးး နောက်ဆုံးမှ လာတယ် ဆိုလို့ စိတ်မဆိုးနဲ့ သမီးက အမှန်တိုင်းပဲ ပြောတတ်တယ် ဟိ
ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေး ဇာတ်လမ်းမျိုး ဆိုပေမယ့် နောက်ထပ်လည်း ဖြစ်နေကြအုံး မှာပါပဲ။ တစ်ဦးကို တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားချစ်ခင်မှုနဲ့ အိမ်တွင်းရေး သာယာ အောင် ကိုယ်စီ စွမ်းဆောင် နိင်ရင် တည်တံ့တဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတွေ များလာမှာပဲ။
ယောကျာ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမပဲဖြစ်ဖြစ် သွားရင်းလာရင်းနဲ့ မထင်မှတ်တဲ့ အချိုးအကွေ့တစ်ခုခုနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အိမ်ထောင်ဖက်ရဲ့ အမူအကျင့်ကို အလွတ်ရအောင် လုပ်ထားသင့်ပါတယ်။
ဒါမှ ခြေလှမ်းပျက်စပြုထဲက သတိထားမိမှာ။
အပင်ငယ်တုန်း ဆွဲနှုတ်တာ ပိုလွယ်တဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။
(တွေးမိသလောက် ပြောကြည့်တာပါ အိမ်ထောင်သည်မဟုတ်ပါကြောင်း)
အရေးထဲ အပေါ်က လူက ကြွားသွားသေးတယ် :P
ဘယ်အရာ မဆို နှစ်ဘက် မျှနေဖို့ပဲ လိုတာပါပဲ။
တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် နိုင်ခြင်းက ဒီလို ပြဿနာတွေ စလာတာပါ။ အင်းလေ. . ဖြစ်ချိန်သင့်၍ ဖြစ်ရသည် လို့ပဲ ပြောရမှာပေါ့။
ညီမလေးရေ စာအရေးအသားရော အကြောင်းအရာရော သိပ်ကိုကောင်းပါတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေက အပြင်မှာ တကယ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အဖြစ်တွေပါ။ ဒါကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ အချစ်တခုတည်းနဲ့ မရဘူးလို့ အစ်မအမြဲပြောတယ်။ အချစ်ဆိုတာ အကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ လူတယောက်အပေါ် သူ့အလိုလို ချစ်နေတဲ့ ခံစားချက်မို့ အကြောင်းပြချက် မရှိဘဲနဲ့လည်း ဒီအချစ်ခံစားမှုက ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အချစ်ဆိုတာ မတည်မြဲဘူး။ ကလေးတွေ ရသွားပြီးနောက်ပိုင်း လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာ အချစ်ကို တည်မြဲချင်ရင် တယောက်ကိုတယောက် အထင်ကြီးလေးစားစရာ တခုခု ရှိနေပြီး အပြန်အလှန် လေးစားမှု၊ နားလည်မှု ရှိနေမှ အချစ်ကို ဆက်လက်တည်တံ့အောင် ထိန်းသိမ်းလို့ရပါတယ်။
အပြင်မှာ တကယ်ဘဲ ဒီလိုတွေ ရှိပါတယ်
စာထဲကတော့ ချစ်ကြိုက်ညား တွေပေါ့ ကောင်းတယ် အားပေးနေပါတယ်နော်
ဟုတ်တယ်နော်။အိမ်ထောင်ရေးဆိုတာ တစ်ခါတစ်လေ ထီထိုးရသလိုဘဲ။
စိတ်ဝင်တစားကြီးကို ဖတ်သွားပါတယ်၊ ရီမာချိုလို အမျိုးသမီးတွေနှင့် ဒဏ်ရနှင့် ရင်သွေးလေးတွေအတွက် ဝန်လေးခံစားမိပါတယ်၊
ဇာတ်လမ်း မှာဘဲလို့ထင်ခဲ့တာ ကိုယ်တိုင်ကြုံမှဘဲ
ညီမရဲ့ ပထမဦးဆုံး အမှားက သူကို လက်ထက်ခြင်းဘဲ
သိပ်ကိုခက်ခဲပါတယ်. တစ်ချို့တွေက အပြင်မှာတစ်မျိုး အတွင်းစိတ်ကျတစ်မျိုး ရှိတတ်လေတော့
ယုံစားမိတဲ့ မိန်းမသားတွေဘ၀က အမှားတွေနဲ့ဘဲပေါ့
တစ်ချို့ကျတော့ အိမ်ထောင်မကျခင်ရော ကျပြီးတော့ပါ
ကောင်းနေပေမဲ့ ကြာသွားပြန်တော့ ဖောက်ပြန်ကြပြန်တယ်
မြန်မာမှုနယ်ပယ်မှာတော့ မိန်းမဖြစ်သူဖောက်ပြန်တာက ရှားပြီးတော့
သိပ်ကို လေးနက် ခက်ခဲပါတယ်... စစ်ပွဲနဲ့တူမယ်လို့ထင်ပါတယ်
ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ လေးစားအထင်ကြီးစိတ်၊ ငွေကြေး၊ နားလည်မှု အစရှိသဖြင့်ပေါ့နော်..
သိမ်းကြုံးပြီး မစွတ်စွဲချင်ပါဘူးးး ....
ဒါပေမယ့် အဲ့ဒါတွေက ရှိနေဆဲပဲ ...
အဲ့လိုမျိုးတွေ မရှိကြရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲ ..
ဆေးမှင် စုပ်ထိုး ဆိုတာ
ဖျက်လို့မှ မရတာ ...
ယောကျာင်္းနဲ့ မိန်းမ ခံစားမှုခြင်းမတူပါ..
မယ်ကိ post ထဲကလို..ကြက်ဖတကောင်လျင်ကြက်မတကောင် ထားပေး
တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀ထဲက ရေစီးကြောင်းတွေဟာ ဒီလိုပါဘဲလေ။ သင်ခန်းစာယူစရာ သံဝေဂရစရာတွေ အများကြီးပါဘဲ။ နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေ စောင့်မျှော်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။
ယောက်ျားတွေက ဒီလိုပါပဲ ဟု ဝါးလုံးရှည်နဲ့ရမ်းရမလား...
လွတ်ထွက်မသွားခင်ကတည်းက ထိန်းသိမ်းထားတတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်...
လူတယောက်ကို ထိန်းဖို့ထက် အဲဒီလူရဲ့စိတ်ကို ထိန်းနိုင်ဖို့က ပိုအရေးကြီးပါတယ်..။
သူ့ရဲ့စိတ်တွေ ကိုယ့်အပေါ်မှာ အမြဲရှိနေစေဖို့ သူ့ကိုလည်း ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာ နှစ်ထားနိုင်ဖို့ ကြိုးစားရပါသေးတယ်..။
နောင်တချိန်မှာ ညီမလည်း အိမ်ထောင်ကျရအုံးမှာမို့ သင်္ခန်းစာယူရင်းနဲ့ပဲ..အိမ်ထောင်သည်တိုင်း အိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်...
အစ်မရေ့....ဖတ်ကောင်းတယ် ။ အစ်မ အရေးလေးလဲကြိုက်တယ် ။ ဆရာမ ၀င်းဝင်းလတ်ရဲ့ စကားလေးကိုလည်း သဘောကျမိတယ်...။
သင်္ခန်းစာယူစရာ တွေးစရာလေးတွေ အများကြီးပဲ။ ဖတ်ကောင်းတယ်။ တအားနဲ့ ကြိုက်တယ် ..
၀တဿထုရှည်ဆိုဒ်ကို ၀တဿထုတိုလုပ်ထားတော့ကာ ဖတ်ရတာ အက်ဆေးနဲ့ တူလှပါတယ်။
၃ နာရီကျော်ကြာတဲ့ ရုပ်ရှင်ကြီးကို အကျဉ်းချုပ်ရေးထားသလိုပဲ ခံစားချက်တွေ ပေါ့နေတယ်။
မိန်းမဘက်ကလိုတယ်ထင်တာပဲ..... :) ထင်တာပြောတာပါ
ဒီစာလေးကို ၂ခေါက်ရှိပြီ.. မလေးလာဖတ်တာ..။
မိန်းမက နှုတ်ကြမ်းတာက.. စတာပဲလား..။
ယောင်္ကျားတွေဖောက်ပြန်ချင်တိုင်း.. မိန်းမအထိန်းအသိမ်းညံ့ဖျင်းလို့ဆိုတဲ့ အတွေးတွေကြောင့်လား.. တစ်ကယ်ပဲ အထိန်းအသိမ်း ညံ့ဖျင်းလို့လား။
အချစ်တွေကုန်ဆုံးသွားလို့ နောက်တစ်ယောက်ကိုချစ်သွားတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာကော..ဒီကြားထဲ မိန်းမက တစ်ချိန်လုံးကြိမ်းမောင်းနေမယ်ဆိုရင်ကော...။
အိမ်ထောင်ထိန်းသိမ်းနေရရင်တဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ.. ရည်းစားဘ၀လို ပတ်ချွဲနှပ်ချွဲ တစ်ချိန်လုံး လုပ်မနေနိုင်ကြတော့လို့လား..။ ဒီလိုမျိုးကြီး တစ်ချိန်လုံး လုပ်နေရတော့မှာလား..။
Men are visual! ဆိုတဲ့ သူတို့ကိုပဲ သဘောထားကြီးပေးရတော့မှာလား...။ I think women are somewhat visual as well. အဟွန်း..။
ကလင်တန်မိန်းမလို.. ယောင်္ကျားကိုခွင့်လွှတ်လိုက်ပြီး ဆက်ပေါင်းတဲ့ မိန်းမတွေကြတော့လည်း Gain/Loss Ratio ကို သိပ်တွက်တတ်လွန်းသွားတဲ့ ဥာဏ်ကြီးရှင် မိန်းမမျိုးတွေလို.. လူပုံအလယ်မှာ အနိုင်ပိုင်းနိုင်လိုက်တဲ့ပုံ ဖန်တီးပြီး နေကြရတော့မှာလား...။
နောက်ဆုံးတော့ Are we all really monogamous? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကိုပဲ မေးမိပါတော့တယ်။ Genetically .. I don't think humans are monogamous. ဒါကို ဘာသာတရား၊ အသိတရားတွေနဲ့ ထိန်းချုပ်ထားကြတယ်လို့လည်း ထင်မိပါတယ်။
သိပ်ကောင်းပါတယ်...။ ဒီထက်ချဲ့ရေးလိုက်ရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ကိုဖြစ်မယ့်စာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်ဖြစ်တက်ပါတယ် ၊၊ တစ်ချို့စကားလုံးလေးတွေ အတွက် ဆွေးနွေးစရာ ဖြစ်မိပေမယ့် ဖြစ်တက်တဲ့ သဘော မို့ ဘာမှ ထပ် မပြောလိုတော့ပြီ....